Best ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma na February 2021 | Free Pro Trading Guide!
Ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma 2021
Ike dị ka kol na mmanụ emeela ka ụwa gbanwee ruo ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mmanụ nke oge a anyị maara ugbu a nwere ike ịmalite na njedebe 1830s mgbe mgbanwe ụlọ ọrụ malitere.
Ọganihu ngwa ngwa na 2021 na mmanụ bụ otu n'ime ngwaahịa nnweta kachasị dị egwu enwere. N’ụwa niile, anyị na-eji gbọmgbọm dị nde 95 dị egwu kwa ụbọchị! Inye na ọchịchọ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi mgbe a bịara n'ihe bara uru, ya mere mmanụ na-ahụkarị nnukwu mgbanwe ahịa.
You na-achọ ka ọ nwee ohere ịre ahịa ahịa a? Ozi ọma ahụ bụ na echekwaghị akụ a maka nnukwu ahịa ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ na oke ego. Site na ịgbaso ntuziaka dịka nke anyị ma na-eme ụfọdụ nyocha nke gị, ị ga-azụ mmanụ dị ka pro tupu ị mara ya!
Ọzọkwa, n'ihi nnukwu ọnụ ahịa na-agbanwe n'ahịa, ọ bara uru maka ndị ahịa na-adịru nwa oge. Mgbe ị na-ere ngwaahịa a n'ịntanetị, ndị ahịa na-enwe ike ị nweta uru site na ahịa na-arị elu, yana mgbe akụnụba na-agbada na uru.
Ọ bụrụ na ahia mmanụ dị ka ihe ị nwere ike inwe mmasị na ya, nọrọzie ebe ị nọ. Anyị ga-enyocha otu esi ere mmanụ, kpuchie atụmatụ ndị a ma ama ma tụlee ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma nke 2021.
Isi ahia ahia mmanu
Ka anyi bido site na imikpu mmiri n'ime isi ahia ahia. Mgbe ere mmanụ ị na-aiming ịkọ n'ụzọ ziri ezi na ma price mmanụ na-aga ịrị elu ma ọ bụ daa. Uru nke ihe ọ bụla bara uru na-abụkarị site na ọkọnọ na ọchịchọ nke ahịa.
Mgbe enwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ na-azụ mmanụ karịa ka a na-ere ya - ọnụahịa ga-ebili. N'aka nke ozo, mgbe otutu mmadu na ere ahia - onu ahia gha ada. Ndị ahịa nwere ahụmahụ karị nọ na mbara igwe na-ejikarị uru mgbanwe ndị a eme ihe.
Maka ndị na-amaghị, ka anyị nye gị ihe atụ bara uru banyere etu azụmaahịa mmanụ si arụ ọrụ:
A na-ekwu mmanụ mmanụ Brent na $ 37 kwa gbọmgbọm
Have nwere mmetụta na ọnụahịa a ga-ebili
N'iburu nke a n'uche, ị na-etinye a ịzụta ịtụ ahịa $ 500
I kwubiri n'ụzọ ziri ezi - ugbu a, ọnụahịa Brent dị $ 56 kwa gbọmgbọm
Ọnụ ego a na-egosi anyị na uru mmanụ mmanụ Brent arịgoro site na 61.35%
N'ihi ya, ị kpebiri idobe a ere iji mechie uru gị
Iwu gị bara uru ugbu a $ 806.75
Site na $ 500 gị, i nwetara uru $ 306.75 na azụmaahịa a
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ anyị, ị mere mkpebi ziri ezi - yabụ ị nwetara uru dị mma nke $ 306.75.
Iji nweta ahịa ma malite ịzụ ahịa mmanụ ị chọrọ ezigbo onye na-ere ahịa. Anyị edepụtara anyị 5 kacha elu ndị na-ere mmanụ mmanụ na-aga n'ihu na ibe a. O yikarịrị ka ị ga-azụ mmanụ site na CFDs - nke na-enyocha mgbanwe ọnụahịa nke akụ ahụ. N'ihi ya, ịkwesighi iburu nnukwu mmanụ mmanụ, nke ga-abụ nro nzuzu.
Gịnị Na-akpata Efu Mmanụ?
Ghọta ihe na-eme ka uru mmanụ na-aba na-agbanwe nwere ike inyere gị aka n'ezie ma a bịa n'usoro mkpebi nke azụmaahịa - yana ị nweta uru.
Anyị ekwuola na ọnụahịa nke akụ ọ bụla na-agbanwe n'ihi ọkọnọ na ọchịchọ. Ihe mgbaru ọsọ gị dị ka onye na-ere mmanụ mmanụ bụ ịnwale ma hụ ma ọnụahịa ahụ ọ ga-arị elu ma ọ bụ ala.
Biko chọta n'okpuru ndepụta nke isi ihe ma a bịa n'ahịa ahịa mmanụ.
Ọkụ mmanụ na USD
Ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa nile na-eji mmanụ eme ihe kwa ụbọchị ma na-adị mfe otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu n'ịzụ ahịa. A na-ejikwa dollar US eme ihe ma zụọ ahịa site na nde mmadụ niile n'ụwa.
A na-erekarị mmanụ site na gbọmgbọm na dollar US. N'oge edere na ngwụcha 2020, nke a pụtara $ 36.17 maka otu gbọmgbọm. Na nke a, ị na-anwa ịkọwa ma ọnụahịa mmanụ ọ ga-ada n'okpuru $ 36.17, ma ọ bụ bilie karịa uru ahụ.
Dịka ị ga - esi mara site na ihe atụ anyị na ngalaba dị n’elu - ma ị na - enweta uru na - agba ịnyịnya ma ị buru amụma ngbanwe ahụ n’ụzọ ziri ezi - ma debe usoro ziri ezi n’ụzọ kwekọrọ na ya.
Brent na WTI Crude Benchmark Indices
Akara nke anyị na-ezo aka na ya dị ka mgbanwe ngwaahịa nke atọ - na-egosi mgbanwe na-ajụ ma na-arịọ ọnụahịa. E nwere ọtụtụ akara aka ebe, ọnụahịa ndị a dabere na ọkọnọ na mkpa, dịka anyị metụrụ aka.
Abụọ n'ime akara benchmark kachasị mkpa bụ WTI crude na Brent crude. Nke ikpeazu bu akara mbu nke 1 agafe na United States. West Texas Intermediate (WTI) bu akara mbu nke 1 n'ime na United States.
Ha abụọ nwere mmeghari ahịa yiri nke a, mana uru nke ọ bụla ga-adị iche. Ọ bụrụ na mmanụ abanyela n'ókèala buru ibu - nke a ga-emetụta ma benchmark na-adịghị mma. N'otu ụzọ ahụ, ọ bụrụ na enweghị mmanụ zuru ezu - uru nke ndekpọ mmanụ abụọ ga-ebili.
Geopolitical ọgba aghara & Tụkwasịnụ na Ina
Anyị ekwuola ọkọnọ na ịchọ oge ole na ole ugbua, nke bụ n'ihi na ọ bụ nnukwu akụkụ nke etu esi eji akụ akpọrọ ihe. A bịa na mmanụ kpọmkwem, ọnụahịa nwekwara ike ịmetụta oke ọgba aghara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dị ka esemokwu na Middle East. Ghara ikwupụta 'Organizationtù Mba Ndị Na-ebupụ Mmanụ Ala' (OPEC).
OPEC bu nke Saudi Arabia na-edu ma nwee kwa mba 14 ndi ozo nwere mmanu. Ọ bụrụ na ị maghị ihe OPEC bụ, nzukọ ahụ na-edozi ahịa mmanụ. Otu ụzọ dị mkpa ha si emezu nke a bụ site na ịchịkwa ọkọnọ na ngwa ahịa nke ngwa ahịa.
Ejiri dị ka ụzọ iji chebe onwe ya megide ndị dike mmanụ US, OPEC na-achịkwa ahịa site na ịpịpụta mmanụ, na-ama na ọ ga-eme ka ọnụahịa ahụ daa site na elu. N'ụzọ megidere nke a, nzukọ a nwere ike ibelata ngwa ngwa ịmepụta mmanụ iji bulie ọnụahịa ahịa.
Kedu ka m ga-esi ahia mmanu?
Ugbu a na inwere isi ihe ahịa mmanụ dị na etu esi azụ ahịa ahịa na ụzọ ọ bụla - ohere ị chọrọ ịma etu esi azụ ya n'onwe gị.
Ahịa Mmanụ: CFDs
Mostzọ kachasị ewu ewu ma dị mfe ịzụ ahịa mmanụ bụ site na CFD broker, dịka ndị edepụtara na ntuziaka anyị.
Anyị kwuru na ahia mmanụ site na CFDs pụtara na ị nweghị akụnụba kpatara (n'ọnọdụ a mmanụ). Kama nke ahụ, CFD na-enyocha mgbanwe ọnụahịa nke ụwa - nke abụọ site na nke abụọ.
N'ihe banyere uru mmanụ, ndị na-ere ahịa CFD gị ga-enweta uru ahịa site na ndenye aha benchmark a ma ama dịka WTI ma ọ bụ Brent kwuru.
Ka anyị nye gị ngwa ngwa nke azụmaahịa CFD mmanụ:
Ihe WTI benchmark na-efu mmanụ na $ 34.50
your Fzụ ahịa CFD n'elu ikpo okwu kwuru $ 34.50
Ikwere na ọnụahịa mmanụ ga-ada ka ebe a ere ịtụ ahịa $ 200
3 ụbọchị mgbe e mesịrị na WTI benchmark ahịa mmanụ na $ 30.50
Dika odi, ahia CFD gi na acho mmanu na $ 30.50
Place na-etinye a ịzụta ịtụpụ ahịa
I nwetara uru nke 11.59% na ọnọdụ CFD mmanụ a
Ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma agaghị agwa ndị ahịa ọrụ ọ bụla na azụmaahịa CFDs. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị ga-enwe ike itinye ihe ntinye aka ruo 1:10.
Nke a pụtara na ihe ọ bụla $ 1 ị nwere na akaụntụ gị - ị nwere ike iji $ 10 zụọ ahịa. N'ụzọ dị oke mkpa, ntinye ego a nwere ike ime ka uru gị bawanye - kamakwa ọghọm gị.
Trazụ mmanụ: Nhọrọ
Enwere ike iji 'nhọrọ' gbanye mmanụ. Dingzụ ahịa n'ụzọ dị otú a pụtara na ị ka kwesịrị ịkọ nkọ banyere ịrị elu ma ọ bụ ọdịda nke akụ gị - mana ọ ga-emerịrị tupu nkwekọrịta ahụ agwụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ mmanụ manu ị nwere mmasị ịzụ ahịa mgbe ahụ ị kwesịrị ịma na ị nwere nri ịzụta ma ọ bụ ree akụ ahụ, mana ọ bụghị inye ikike ime otú ahụ.
Nke a bụ ihe atụ dị ngwa nke ahia mmanụ na-eji nhọrọ:
your nhọrọ nkwekọrịta na onye na-ere ahia gị bụ ọnwa 3
'Ọnụ ego iku' na nkwekọrịta a bụ $ 60
Needkwesịrị ịkwụ ụgwọ 'adịchaghị' nke $ 3 iji mepee nkwekọrịta ahụ
E nwere mmanụ dị narị mmanụ 500 dị na nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla
Have nwere mmetụta na uru mmanụ ga-ebili karịa $ 60 - n'ime ọnwa 3
N'iburu nke a n'uche, ị na-azụ nhọrọ oku
Havekwesịrị ịhazi $ 1,500 maka nkwekọrịta a (500 * $ 3 adịchaghị)
Ugbu a, ka anyị kwuo ọnwa atọ gafere ma mgbe nkwekọrịta ahụ gwụchara ọnụ ahịa $ 3. Nke a bụ $ 80 karịa 'ọnụahịa iku' gị nke $ 20 - ekele, ị nwetara uru.
Uru ị na-erite na ya bụ $ 20 kwa gbọmgbọm mmanụ
Gị 'premiom' bụ $ 3 yabụ net net gị bụ $ 17 maka gbọmgbọm ọ bụla
Nhọrọ ịkpọ oku gị nwere 500 gbọm - nke ahụ bụ uru zuru ezu nke $ 8,500 (500x $ 17)
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nkwekọrịta nkwekọrịta gị ga-agbanwe dị ka uru mmanụ. Agbanyeghị, ị ga - enwe ike iwepu nkwekọrịta gị oge ọ bụla masịrị gị - n'oge ọ bụla n'etiti usoro izizi gị na ụbọchị nkwekọrịta gị ga - agwụ.
Ahịa Mmanụ: Ọdịnihu
CFDs dị mma maka atụmatụ azụmaahịa dị mkpirikpi, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ azụmaahịa gị oghe obere oge ị nwere ike ịhọrọ futures. Ọdịnihu na-abịa na nkwekọrịta nkwekọrịta nke ọnwa 3, na nkwekọrịta ọ bụla nwere ọnụahịa ya - dịka ọmụmaatụ, $ 45 kwa gbọmgbọm mmanụ.
Ọ dị nnọọ ka n'ihe banyere nhọrọ - ịkwesịrị ikwenye n'ụzọ ziri ezi banyere ọnụahịa ahụ ga-adị elu ma ọ bụ obere site na njedebe nke nkwekọrịta ahụ. Isi ihe dị iche n'etiti nhọrọ na futures bụ na na nke ikpeazụ ị na-iwu iwu ma ịzụta ma ọ bụ ree akpata akụ na ajụjụ ma ọ bụrụ na ị ka na-ejide ọdịnihu mgbe ha nwụrụ.
Dị ka ọ ga-esiri ike ịchọta ebe ị ga-edebe ọtụtụ mmanụ mmanụ, ị ga-achọ tufuo nkwekọrịta mmanụ gị n'ọdịnihu n'oge ụfọdụ tupu ụbọchị mmebi gị!
Zụ mmanụ - Atụmatụ atọ ama ama
Inwe ike ịzụ ahịa mmanụ n'ịntanetị ma nweta uru na-agbanwe agbanwe ga-achọ ka ị nwee azịza ole na ole. Iji nyere gị aka igosi gị n'ụzọ ziri ezi, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ atụmatụ azụmaahịa ndị na-ewu ewu nke ndị na-etinye ego n'oge na-eji.
Nzuzo Mmanụ 1: Jiri Nlekọta Nkwado
Nkwado na-egosi ndị ahịa 'isi ọnụahịa ọnụahịa' nke ihe onwunwe dị na ajụjụ. N'okwu a, ebumnuche bụ iji gosipụta nguzogide na nkwado ọkwa na ahịa mmanụ.
Nkwado ọkwa bụ ngwá ọrụ bara ezigbo uru ma a bịa n'ịzụ mmanụ ka ị ga-enweta nghọta bara uru banyere ohere ịzụ ahịa mmanụ.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na mmanụ dị n'etiti ọgbaghara - ị nwere ike ime ihe a nkwụsị ọkwa. Nke a ga - egbochi ọnụ ahịa nke ngwa ahịa ahụ na - agbada ọzọ.
Site na ịbanye ahịa n'elu nkwado akara ebe n'out oge actioning a nkwụsị-ọnwụ ịtụ n'okpuru usoro nkwado - ị nwere ike belata ihe egwu gị ruo n'ókè ụfọdụ.
Atụmatụ Strategy 2: Mmanụ Mmanụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ obere uru na mgbe niile, mgbe ahụ ịkpụcha mmanụ nwere ike ịbụ maka gị. Nke a gụnyere ịmepe ọtụtụ ịzụta na ere na-enye iwu n'otu ụbọchị ahia - nke pụtara na ị nwere ike iji ọtụtụ ahịa a na-agbanwe agbanwe mee ihe.
Thiszọ nke a si arụ ọrụ bụ na ị ga-achọ iji ohere oge ebe mmanụ na-azụ ahịa n'ime oke ọnụahịa. Iji maa atụ, ka anyị were ya na mmanụ a na-ere ahịa n’etiti $ 35 na $ 38 kwa gbọmgbọm ruo ọtụtụ ụbọchị.
Dị nkwado dị obere dị otu a na-enye ndị ahịa ahịa ahịa nwere ọgụgụ isi ohere ịbanye oge zuru oke ma ree ọnọdụ n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ. Uzo a banyere ahia mmanu di ala.
E kwuwerị, onye ahịa ahụ maara na ọnụahịa ahụ ga-emesị gbagoo $ 38 ma ọ bụ n'okpuru $ 35. Iji gbochie nke a, ha ga-enwe usoro nkwụsị-nkwụsị na nsọtụ abụọ nke nso. Ruo oge ahụ, onye na-ere mmanụ mmanụ nwere ike ịba uru ọ bụrụhaala na oke ahụ ka dị!
Nzube Mmanụ 3: Trazụ ahịa Mmanya Mmanụ
Ebumnuche nke ịzụ ahịa mmanụ bụ ịgafe usoro ahịa zuru oke site na iji ụdị nyocha dị iche iche. Ebumnuche nke ịzụ ahịa mmanụ bụ ịnwale ma jiri ya mee ihe ịzụta nyere iwu mgbe ike mmanụ na - aga n'ike - nke ga - enyere gị aka ijide uru ndị ahụ.
N'iburu nke ahụ n'uche, ndị ahịa na-ere ahịa nwere ike imepe ọnọdụ maka ebe ọ bụla site na ụbọchị ole na ole ruo izu na njedebe. N’ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ọ dị ka ihe a na-ahụ maka ya, onye ahịa nwere ọgụgụ isi ga-eme ihe abụọ. Nke mbu, ha gha apu n’onodu ha iji hu na ha nwere ike igbachi uru ha riri na udiri ajuju.
Mgbe nke ahụ gasị, onye ahịa ahụ nwere ike tinye ọzọ zụta ma ọ bụ ree ahịa iji jide usoro ọhụrụ. Ọzọkwa, ahia ahụ ga-emeghe maka ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnwa ole na ole. Isi ihe dị na ya bụ na ha na-ele anya na ha ga-anọnyere usoro ahịa ahịa sara mbara ma ọ bụghị ijide obere mgbanwe dị mkpụmkpụ
Usoro Dị Mkpa Mgbe ingchọta Onye Na-ere ahia Dị Mma
Ọ dị mma yana inwe nghọta maka etu esi azụ ahịa nke ịchọrọ iji lekwasị anya. Agbanyeghị, dịka anyị siri kọwaa, ọ dị gị mkpa ka onye na-ere ahịa ga - enyere gị aka ịbanye n’ahịa mmanụ - ma mebe iwu gị n’aha gị.
E nwere ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enye ọrụ ahịa mmanụ. Ọ bụ ezie na nke a na-ada ụda, ka ị na-enwewanye nyiwe ahịa, enwere ike isiri ha ike ịchọta nnukwu.
Anyị echekwala gị ọrụ ụkwụ ihe atụ ma chịkọta ndepụta nke usoro dị mkpa iji tụlee mgbe ị na-achọ ihe dabara adaba maka ebumnuche azụmaahịa gị.
Ojiji nke nyiwe
Ma ị bụ onye ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ chee onwe gị ka ọ bụrụ onye na-azụ ahịa oge - anyị chere na iji onye na-ere ahịa na mfe ịnyagharịa weebụsaịtị na-eme ka ọdịiche dị iche.
Tradingfọdụ nyiwe azụmaahịa na-enye ndị ahịa egwu niile na ebe nrụọrụ weebụ ịgba egwu, nke dị mma. Ma, ọ nwere ike ịme ka o sikwuoro gị ike ijide iji azụ ahịa mmanụ.
N'eziokwu, ị kwesịrị ị na-achọ a ore ahia na a ibu ọrụ-enyi na enyi n'elu ikpo okwu, na onye na-eme na-achọta gị chọrọ akpan owo na ịtụkwasị gị iwu mfe-peasy.
Onweghi ụlọ ọrụ ntanetị dị n'ịntanetị bụ otu, yabụ mgbe ị na-achọ ikpo okwu kwesịrị ekwesị maka mkpa azụmaahịa gị - ọ bụghị naanị ịnweta ahịa ka ịchọrọ ịtụle.
Commgwọ na ụgwọ nwere ike ime nnukwu uru na uru gị ma ọ bụrụ na ịhọrọ usoro ịzụ ahịa na-ezighi ezi. Fọdụ ndị na-ere mmanụ na-akwụ ihe karịrị $ 10 maka azụmahịa azụmahịa ọ bụla. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị mma maka azụmaahịa ndị ahụ buru ibu, ọ gaghị abụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji obere osisi ga-enweta ahịa ahụ.
Site na nke a, ị ga-ahụkarị na ndị na-ere ahịa mmanụ na-akwụ ụgwọ ọrụ n'ụdị percentages. Ọ bụrụ na onye na-ere ahia gị ebubo ọrụ 1%, ị ga-etinye $ 1,500 - na nke a, ịkwesịrị ịkwụ onye na-ere ahịa gị $ 15.
Nke ahụ kwuru, ị nwere ike iku ume ugbu a - ndị na-ere mmanụ kacha mma anyị na-atụle na ibe a na-enye ndị ahịa ọrụ azụmaahịa site na CFDs.
Naanị ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ahia mmanụ, ị nwere ike ọ gaghị ama na 'mgbasa'bu oghere di n'etiti ịzụta price nke mmanụ, na ere ọnụ mmanụ. Obere ọdịiche ahụ, ọ ka mma maka gị dị ka onye na-azụ ahịa. Enweghị ndị na-ere ahịa abụọ bụ otu, yabụ lezie anya maka nyiwe azụmaahịa na mgbasa ozi na-erughị oke.
Nkwụnye ego na mwepu Protocol
O doro anya na ị kwesịrị ịlele iji hụ ụdị usoro ịkwụ ụgwọ dị tupu imikpu onwe gị na usoro ntinye aha. Otú ọ dị, anyị kwesịrị ikwu na ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịnara nkwụnye ego waya. Yabụ, ọ bụrụ na inwere usoro ịkwụ ụgwọ n'uche - dịka kaadị akwụmụgwọ / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ Paypal - mgbe ahụ ọ dị oke mkpa ka ị hụ na edepụtara ya na ikpo okwu.
Ọ dịkwa mkpa ịlele ma enwere ụgwọ ọ bụla a ga-akwụ maka ma ọ bụ itinye ego ma ọ bụ wepu na akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eji n'elu-gosiri mmanụ trading n'elu ikpo okwu Skilling, ị gaghị ebubo ihe ọ bụla na-edebe!
Dịka ị nọ ebe a ịchọta ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma ugbu a, ọ bụ naanị na anyị kwuru ụkpụrụ. Naanị site na ịbanye na nyiwe ahia na-ejide ikikere site n'aka ndị na-achịkwa iwu dịka FCA ma ọ bụ ASIC - ị nwere ike ijide n'aka na ịmara na ị na-echebe site na aghụghọ na ndị na-ere ahịa dodgy.
Emepụtara usoro iwu a iji mee ka ahịa azụmaahịa dị ọcha ma dịkwa mma maka mmadụ niile. Ndị na-ere ahịa ederede (dị ka ndị dị na ndepụta anyị) ga-agbaso ọtụtụ iwu siri ike, otu n'ime ha bụ 'nkewa akaụntụ'. Maka ndị na-amaghị, nkewa nke akaụntụ pụtara na a ga-edebe ego azụmaahịa gị na akaụntụ ụlọ akụ dị iche na nke ụlọ ọrụ azụmaahịa.
Mmanụ Trading Online - Ndụmọdụ ise iji gafere
Na ụwa nke ahia mmanụ, ị nweghị ike ikpughe atụmatụ zuru oke, atụmatụ na usoro. Na njedebe nke ụbọchị, ihe ọ bụla ị kpebiri iji usoro nke gị mee dịịrị gị.
Ka o sina dị, anyị ekpokọtara mmanụ ise Atụmatụ ahia n'ihi na ị na-atụle. Enwere olile anya, nke a ga - enyere gị aka n’ịghọ onye ahịa ahịa mmanụ n’ọdịnihu!
Gbalịanụ Na-eme Ka Akụkọ Ọhụrụ Hụ
Icheta ihe niile gbasara amụma mmanụ na amụma ọhụụ ga-enyere gị aka ịkọ amụma nke ahịa mmanụ. A sị ka e kwuwe, ụlọ ahịa mmanụ na-adabere n'ụdị na ọkọnọ.
Agụụ ma ọ bụ nsogbu ego nwere ike igbochi ọchịchọ na ọkọnọ a. Enwere otutu ngwa ahia na weebụsaịtị enwere ike inyere gi aka ichota ihe omuma a.
Jiri mgbaàmà ahia mmanụ
Mgbapụta mmanụ mmanụ dị ka enyemaka na azụmaahịa gị. Fọdụ ndị ahịa anaghị enwe oge iji soro akụkọ ego na akụ na ụba - ọ bụghị ịdebe ịdebe data ọnụahịa. N'iburu nke ahụ n'uche, akara ngosi mmanụ nwere ike ịbụ ihe enyemaka nye ndị ahịa na-enweghị uche.
Ihe ngosi ahia na-enyocha 24/7 ahịa site na iji algorithms na ngwanrọ ọkaibe iji gbochie ohere ịzụ ahịa bara uru. Ihe na-esote bụ ihe amamihe - onye na - eweta ọrụ ga - ezitere gị mgbaama na - egosi ebe ị ga - abanye na ma ị kwesịrị ịzụta or ere.
Ọbụghị naanị nke ahụ mana mgbaàmà ahụ na-atụkwa aro a nkwụsị-ọnwụ ebe, na otu isi ihe ị kwesịrị were-uru. Nke a abughi uzo ahia ahia ahia - dika ma ichoro ime ihe na mgbaàmà bu oku gi.
Anyị na Mmụta 2 Trade na-enye ọrụ mgbaàmà zuru oke nke na-elekwasị anya na Forex na cryptocurrencies. Site na nke a, anyị na-enweta ohere azụmaahịa mmanụ site n'oge ruo n'oge. Mgbe anyị mere, anyị na-eme ka ndị otu anyị mara ụzọ anyị chere na ahịa ga-aga yana ihe kpatara - niile na ezigbo oge site na Telegram.
Ọmụmụ Akwụkwọ Trading Books
E nwere ọtụtụ narị mmanụ trading kpọmkwem akwụkwọ - dị ma na ezi ochie gawara tangible akwụkwọ ụdị, na na udi nke e-akwụkwọ, na audiobooks. Nwere ike ịmịchaa ude nke ihe ọkụkụ site na ịme nchọta ịntanetị dị mfe maka 'akwụkwọ ahịa mmanụ kacha mma'.
Gbalịa mee ihe ngosi ngosi
Oilzụ ahịa mmanụ na akwụkwọ ego bụ n'ezie ihe iji mee ihe. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịzụ ahịa na ọnọdụ ahịa n'ezie maka n'efu, mana ị nwere ike ịme usoro azụmaahịa mmanụ ọhụụ na-enweghị itinye isi obodo gị n'ihe egwu.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa CFD mmanụ n'ịntanetị na-enye ndị ahịa ngosi akaụntụ. Fọdụ na-enye gị ego a kapịrị ọnụ iji zụọ ahịa - dị ka nnukwu akwụkwọ nha nke $ 100,000. Nke a na - achota na inwere ego ego ị ga - enweta iji nweta ahịa ahịa mmanụ tupu ị tinye ego gị.
Were Uru nke Detuo ahia
Detuo ahia abughi ihe nkpuru di iche na ahia n'ịntanetị oghere. Daysbọchị ndị a enwere nhọrọ na ụfọdụ nyiwe ahia nke ga - enyere gị aka 'idetuo' onye na-etinye ego ya na ndekọ ndekọ azụmaahịa gosipụtara.
Ga - enwerịrị nhọrọ nke ndị ahịa depụtaghachiri ịhọrọ site na. Imirikiti na-elekwasị anya na ahịa ndị akọwapụtara ma ọ bụ nwee pọtụfoliyo dị iche iche. Nwere ike ịchọta onye ahịa depụtaghachiri n'ụzọ dị mfe site n'ịchọ onye nwere otu ọdịmma gị.
Mgbe ahụ ihe ị ga - eme bụ itinye opekempe ego achọrọ iji 'detuo azụmaahịa' (na eToro nke a bụ $ 200) wee họrọ iji gosipụta pọtụfoliyo ha maka ihe yiri ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe - ọ bụrụ na ha etinye 1.6% nke pọtụfoliyo nke ha na mmanụ mmanụ, pọtụfoliyo azụmahịa gị ga-egosipụta nke a.
Ndị na-ere ahịa mmanụ kacha mma
Ugbu a na anya gị ghe oghe mgbe ọ bịara ịzụ mmanụ, ị ga-achọ onye na-ere ahịa iji mee ka ebumnuche ego gị bụrụ eziokwu. Ọbụghị naanị na anyị tụlere usoro, iwu na ntụzi aka - kamakwa usoro dị mkpa iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa.
Anyị akọwapụtaala ise kacha mma anyị na-ere mmanụ maka ị tụlere, ha niile na-achịkwa nke ọma ma kwanyere ha ùgwù na obodo azụmaahịa.
1. eToro - Ngwongwo ahia ahia kacha mma maka ndi Newbies
eToro nwere ikikere site na ASIC, FCA na CySEC. Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana onye na-ewu ewu a na-ewu ewu nwere ihe dịka nde ndị ahịa 13 na akwụkwọ ya. A na-ahazi usoro ịzụ ahịa mmekọrịta a maka ndị na-etinye ego ọhụụ. Oghere ịzụ ahịa nke onye na-ere ahịa na-adị mfe iji ma e nwere ọtụtụ puku ego iji ahia.
N'ihe banyere ahia mmanụ, karịsịa, eToro na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa CFDs mmanụ. Nke a, n'aka nke ya, pụtara na ị nwere ike itinye ihe ntinye 1:10 na azụmaahịa mmanụ gị. Ọbụghị naanị nke ahụ mana ị nwere ike ịhọrọ ma zụta ma ree ọkwá, dabere na ụzọ ị chere na ọnụahịa ga-aga.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa n'ịzụ mmanụ na ogologo oge mgbe ahụ onye na-ere ahịa na-enye ohere na ahịa United States Oil Fund. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị kpebie ịga ogologo oge na-enweghị tinye n'ọrụ ị gaghị akwụ otu penny na ọrụ. Site na ego a, ị nwere ike ijide azụmahịa gị ma ọ bụrụhaala na-enweghị ọrụ na-akwụghị ụgwọ.
N'ihe banyere mmanụ CFDs, ha anaghị akwụ ụgwọ ebe a. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ị ga-akwụ ụgwọ maka ịkwụ ụgwọ ego abalị maka ụbọchị ọ bụla ị mepere azụmaahịa gị. eToro na-enye ohere ịnweta ETF ndị nwere mmanụ dịka XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.
Akụkụ ama ama maka ndị ahịa na eToro bụ atụmatụ 'Detuo Onye ahịa'. Nke a pụtara na ị nwere ike idetuo azụmaahịa ọdịnihu ma ọ bụ pọtụfoliyo niile nke onye ahịa nwere ahụmahụ - dị ka ihe yiri ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na onye ahịa ahụ depụtaghachiri tinye 2.8% ma ọ bụ pọtụfoliyo ha na 'mmanụ na-atọ ụtọ', a ga-arara 2.8% nke pọtụfoli nke gị n'ọnọdụ a.
Nhọrọ ọzọ na ikpo okwu ahia a bụ ịzụta mbak mmanụ dị ka Royal Duch Shell ma ọ bụ The British Petroleum Company plc (BP). eToro na-enyere ndị ahịa aka inweta uru site na ịrị elu na ọdịda nke ọnụ ahịa mmanụ - na-eji usoro azụmaahịa ogologo oge ma ọ bụ nke dị mkpirikpi.
Nkwụnye ego kacha nta na eToro bụ $ 200, ma ị nwere ike iji ego ịkwụ ụgwọ dị iche iche tinye akaụntụ gị gụnyere nnyefe ụlọ akụ, e-wallets na kaadị akwụmụgwọ / debit.
Ọ dị mfe ịnyagharịa ụlọ ahịa
Tradingzụ ahia mmanụ na-enweghị ego
Detuo Njirimara ahia
Ọ bụrụ na ịkwụghị ụgwọ na USD enwere ego mgbanwe 0.5%
Adịghị mma maka ndị ahịa nwere ahụmahụ n'ihi enweghị nyocha nyocha
3. Capital.com - Commissionlọ Ọrụ Mmanụ Egwuregwu dị iche iche
Capital.com, dị ka eToro ahụ e kwuru na mbụ, bụ ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ n'etiti ndị ahịa mmanụ ọhụrụ. Ejirila ndị na-etinye ego na ọkwa niile mara nka. Ndị ahịa ahịa mmanụ anyị kachasị mma hụrụ na ikpo okwu ntanetị a dị mfe ịnyagharịa ọbụlagodi na ị bụ novice zuru ezu.
Enwere ihe karịrị ngwa ahịa azụmaahịa 3,000 na-enye site na nke a. Ọzọkwa, anyị kwuru na ahia mmanụ ebe a bụ n'efu? Abịa na mgbasa dị oke mkpa, US mmanụ nwere ike iji mgbasa nke naanị 0.04%. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ akụrụngwa ego gị, kpebie ego ole ịchọrọ ịkpọ - ma ị nwere ike ịmalite ire mmanụ.
Platformlọ ọrụ ịzụ ahịa na-enyere ndị ahịa aka ịzụ ahịa n'ọdịnihu dị ka CFDs. Nke a na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ọdịnihu, ma ewepụ n'eziokwu ị gaghị enwe akụ dị n'okpuru. Ownnweghi ihe onwunwe abughi ihe ojoo mgbe ichoro iburu onye mbu nke mmanu!
Dịka anyị kwurula, Capital.com bụ onye na - ere ahịa na - enweghị ụgwọ ọrụ, naanị ‘ụgwọ’ ị ga-ahụ ga-esonye na mgbasa. Ọ bụ ezie na mgbakwunye na nke ahụ, onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ego arụghị ọrụ nke $ 10 - a na-ebo naanị nke a ma ọ bụrụ na i jighị akaụntụ gị iji zụọ ahịa maka ọnwa 12 ma ọ bụ karịa.
Capital.com bụ nke FCA na-achịkwa nke ọma yana CySEC. Ego pere mpe ebe a bụ ihe $ 20 na-emezu nke ọma mgbe ị na-etinye site na e-wallets ma ọ bụ kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ.
Ezigbo ngwa mmụta maka newbies
Nchịkọta aka na mpaghara eserese ọnụahịa
Erozụ ahịa mmanụ ọrụ efu
Atụmatụ azụmaahịa anaghị agbanwe agbanwe
4. AVATrade - Mmanụ CFDs Na Mgbasa Asọmpi
AvaTrade anọwo ebe ahụ kemgbe ihe karịrị afọ 10 ma bụrụ onye na-ere ahịa ma na-achịkwa ya na mpaghara dị iche iche dịka Ireland, Australia, Canada, na Japan - ịkpọ aha ole na ole.
Uzo ahia a na-enye otutu CFD di iche iche di iche iche nke Forex, akụ crypto, na ngwaahịa dika ọla na mmanụ. Ga - ahụ ịgbasa asọmpi dị elu na Avatrade mgbe ị na - ere CFDs mmanụ.
Ọ bụrụ na dị ka anyị ị na-ahọrọ ịnwe nhọrọ nke ịmepụta ngwa ngwa na njem, ma ọ bụ lelee akaụntụ gị wdg - Avatrade na-eme nke a dị mfe n'ihi ịnwe ngwa mkpanaka ya. A na-akpọ ngwa ahụ 'AvaTradeGO' ma nyere gị aka ịzụ ahịa na ịdebe ebe ọ bụla ejikọrọ na ịntanetị.
AvaTrade bụ onye ọzọ na-ere ahịa na ndepụta anyị nke dakọtara na MT4, nke ọzọ na-ere ahịa nke atọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ na ị na-eche echiche ịnwale atụmatụ ịzụ ahịa mmanụ ọhụrụ mgbe ahụ ị nwere ike mepee akaụntụ nnabata n'efu.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịzụ ahịa na akaụntụ ahịa mmanụ na-enweghị ego na-enweghị itinye ihe egwu nke akaụntụ gị ozugbo. Nwere ike ịmalite ịzụ mmanụ CFDs na AvaTrade site na obere $ 100
Nwepu ihe ruru 1:20 na ahịa mmanụ
Etu esi emeghe onye na ahia ahia ahia
Eningmepe akaụntụ na onye na-ere ihe n'ịntanetị na-abụkarị usoro dị mfe. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike ime ya n'okpuru nkeji 10. Anyị edepụtarala n'okpuru ụzọ 3 dị mfe maka otu ị ga - esi bido onye na - azụ ahịa ị họọrọ taa.
Kwụpụ 1: Họrọ ka ị debanye aha na onye na-ere ahịa mmanụ
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịgafe na weebụsaịtị nke onye na-ere ahịa ị họọrọ. Ga-achọ itinye nkọwa ụfọdụ gbasara onye ị bụ, dị ka aha gị zuru ezu, adreesị ozi-e, ụbọchị ọmụmụ na akara ekwentị.
Na-eche na usoro ịzụ ahịa na-enye ikikere site n'aka otu ndị na-achịkwa iwu, ị ga-ebugo otu akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala dịka akụkụ nke usoro KYC (Mara Onye Ahịa Gị). Nke a bụ usoro ọkọlọtọ.
Nzọụkwụ 2: Nye Akaụntụ Akaụntụ Gị
Ozugbo ị mepee akaụntụ gị, ịkwesịrị ịkwado ya, ka ị wee nwee ike ịmalite ire mmanụ. Naanị họrọ usoro ịkwụ ụgwọ site na ndị edepụtara n'elu ikpo okwu wee tinye ego ịchọrọ ịkwụnye. Echefula, ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị chọrọ ka ị zute ọnụ ụzọ nkwụnye ego kacha nta.
Kwụpụ 3: Debe iwu izizi gị
Dị ka ị maara, ịkwesịrị ikpebi ma ọnụahịa mmanụ ọ ga-ebili ma ọ ga-ada. Iji mee nke a, ị kwesịrị ịtụ ka ịzụta or ere na ore ahia gi. Ọ bụ ezi echiche ịmepe akaụntụ ngosi iji nwalee usoro azụmaahịa n'onwe gị tupu ịmalite ịbanye n'ime ego akaụntụ gị.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị dị njikere ibido, ị ka nwere ike ịmalite na obere osisi. Nke a ga - ebelata ọghọm izizi gị ebe usoro izizi jiri mara gị.
Mmanụ Na Mmechi
Ahịa mmanụ na-aghọwanye ewu ewu kwa afọ. Ọ ga - enyere gị aka irite uru site na mbili na ọdịda nke uru akụ ahụ. Na mgbakwunye na nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-enye gị ohere ịzụ ahịa na ntinye ego iji bulie uru ahịa mmanụ gị.
Nke a pụtara na osisi $ 1,000 ga-enye gị ohere ịzụ ahịa kachasị elu nke $ 10,000. N'ezie, enwere ike iji nlezianya mee ihe n'ihi na ọ nwekwara ike ime ka ọghọm gị karịa, ọ bụrụ na ị ga-ezighi ezi n'amụma ahịa gị.
E nwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi gbanye mmanụ. Ozugbo i chebara echiche banyere ebumnuche azụmaahịa gị, ị nwere ike ịhọrọ ịzụ ahịa site na onye na-ere ahịa gị.
All nke kacha mma mmanụ ere agbanwe depụtara na peeji a na-n'ụzọ zuru ezu na-achịkwa - ya mere na ị pụrụ izu ike mfe maara na ị na-emeso a reputable ụlọ ọrụ na online trading ohere.
Kedu ka ị si ere ahịa mmanụ n'ịntanetị?
Zọ kachasị mfe ahia mmanụ dị n'ịntanetị bụ iji onye na-ere ahịa CFD. Ndị CFD na-enyo na ọnụahịa ụwa maka mmanụ, yabụ na ọ pụtara na ị nwere ike ịzụ ya na gburugburu oke ọnụ ala na enweghị ụgwọ.
Enwere m ike ịnweta mmanụ ọla edo na leverage?
N'ezie ị nwere ike. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịzụ mmanụ site na CFDs. Rịba ama, ego ị ga-etinye n'ọrụ ga-adabere na ihe dị iche iche - dịka obodo obibi gị na ọnọdụ azụmaahịa (mkpọsa ma ọ bụ ọkachamara). Ọtụtụ oge, ndị na-ere mmanụ mmanụ ga-amachi ọnụọgụ ego ị nwere ike itinye na 1:10.
Enwere m ike ịzụ ahịa mmanụ n'efu?
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa CFD na-enye gị ohere ịmepe akaụntụ ahịa ngosi. Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụ mmanụ na 100% enweghị ihe ọghọm. Mgbe ahụ, mgbe ị chere na ị nwere nkà achọrọ iji zụọ ahịa na ezigbo ego, ị nwere ike ị nweta nkwalite akaụntụ azụmaahịa gị.
Etu esi etinye ego na mmanu ogologo oge?
Ọ bụrụ n 'ịchọrọ itinye ego na mmanụ maka ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ afọ, a gwara gị ka ị jiri ETF. ETF a ga - atụle ga - enweta ọtụtụ ngwa akụ na - ejikọ na ahịa mmanụ - dịka ọmụmaatụ, ọdịnihu, nhọrọ na mmanụ mmanụ. Nke a ga - enyere gị aka itinye ọnụahịa mmanụ na ogologo oge na - enweghị ego CFD ga - egbochi gị.
You nwere ike ịkọlata mmanụ?
Nwere ike mkpụmkpụ mkpụmkpụ mmanụ site na iji saịtị azụmaahịa CFD. Ihe ikwesiri ime bu ire ere. Ọ bụrụ na ọnụahịa mmanụ agbadala, ị ga-enweta uru.